things wht i've seen, wht i've felt, wht i've tot changed to...: သည်းခံမှု အတိုင်းအတာ
လူတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ သည်းခံနိုင်လဲ....။ ဘယ်လိုအခြေအနေထိသည်းခံနိုင်သလဲ...။ သည်းမခံနိုင်တဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်လိုက်ကြသလဲ...။ အဲလိုလုပ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်သွားကြလဲ...။ ကောင်းကျိုး.. ဆိုးကျိုးတွေ...။ အဲ.. သည်းမခံနိုင်လို့တခုခုလုပ်လိုက်မိတဲ့အခါ ရလာမဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကို လက်မခံချင်ပဲလက်ခံမိတာမျိုးထက်စာရင် သည်းခံစိတ်ကို ပိုကြာကြာမွေးနိုင်အောင် လုပ်တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့သည်းခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာမကျော်လွန်ခင် ကြိုတင်သတိပေးတာမျိုး တစ်ခုခုလုပ်နိုင်ရင်ကော ပိုမကောင်းဘူးလား...။ တစ်ခုခုလုပ်မိသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်အမှားနည်းသွားအောင်ပေါ့....။ အဲလို ယူဆထားတယ်....။ အဲလို ယူဆခဲ့တယ်...။ အဲဒီလို အယူအဆရှိတဲ့ သူမရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကတော့...................
ညီအစ်မ နှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ ဒီမိသားစုမှာ ကစားလဲ ညီမနဲ့ ပဲ... သွားလဲညီမနဲ့ ပဲပေါ့....။ သူမ ညီမလေးက အငယ်ပေမယ့် အကြီးလိုနေချင်သည်။ ဆရာလုပ်ချင်သည်။ တနေ့ညီအမနှစ်ယောက် ကစားနေကြရင်း ထုံးစံအတိုင်း ငြင်းခုန်ရင်း ရန်ဖြစ်ကြလေသည်။ ညီမလေးက တတွတ်တွတ်နှင့် ပြောလို့ မပြီး.... အမှန်တော့ အစ်မရဲ့ အလျှော့ပေးမှုနဲ့ အချော့ကိုခံချင်တာပါ....။ ခက်တာက အစ်မလုပ်သူက ဒေါသကြီးသည်။ တခုခုဆိုဒေါသက အရင်ထွက်တတ်သည်။ မကောင်းသောအကျင့်ပင်။ ဒါပေမယ့် သူမမှာ အဲဒါလေးကို ထိန်းနိုင်ဖို့ ကောင်းသော အကျင့်တခုပါလာသည်က သည်းခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါသထွက်နေပေမယ့် သည်းခံနိုင်အောင်လုပ်သည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး သည်းခံနိုင်အောင်ကြိုးစားသည်။ ဘာမျှပြန်မလုပ်မိအောင် ထိန်းသည်။ ဒေါသစိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ချုပ်တည်းတတ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူမ အတွက် ထိုအရာက ကန့် သတ်ချက်နှင့်။ အတိုင်းအတာနှင့်။ အတိုင်းအတာကျော်လွန်သွားလျှင် သူမ သတိပေးတတ်သည်။ တခုခုမလုပ်မိအောင်ဖြစ်သည်။ ညီမလေးကလဲ တတွတ်တွတ်နှင့်ပြောလို့ ကမပြီးနိုင်.. သူမကျေနပ်အကြောင်းပြောနေဆဲ....။
" နင့်ကိုငါထပ်မပြောနဲ့ တော့လို့ ပြောနေတယ်နော် "
" ပြောမှာပဲ... နင်က .......... "
" နင့်ကိုတိတ်လို့ ပြောနေတယ်နော် ... ငါစိတ်တိုလာပြီ "
" ဘာဖြစ်လဲပြောတော့... "
" နင်ထက်ပြောရင် ငါတခု ခုလုပ်မိတော့မယ်နော် " ပထမ တစ်ခါ သတိပေးလိုက်သည်။
" ပြောမှာပဲ ဘာဖြစ်လဲ... "
" ငါ့ကိုမပြောနဲ့ လို့ ပြောနေတယ်နော်.. ငါတကယ်တခုခုလုပ်မိတော့မယ်နော် " ဒုတိယ တစ်ခါ သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။
" နင့်ကိုကြောက်ရမှာလား ဘာဖြစ်လဲ ပြောမှာပဲ... "
" အေး နောက်တခါထပ်ပြောရင် ငါတကယ်လုပ်ပြီနင့်ကို " တတိယ အကြိမ်ဖြစ်လေသည်။
" ပြောတယ်. ပြောတယ်.. "
" အား.................. အီးးးး ဟီးးးးး " အငယ်မလေး၏ ငိုသံ...။
မီးပူတိုက်နေရာမှ သူမတို့ အမေ ရောက်လာလေသည်။
" ဟယ် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ တိတ်.. တိတ်... အကြီးမ နင်ကလေ ကိုယ့်ညီမကို.... "
သူမ အနားမှာရှိသော သနပ်ခါးခြစ်သည့် သစ်သားသွားပွတ်တံဖြစ်ပေါက်လိုက်ခြင်းပင်။ နဖူးတဲ့တဲ့ကိုသွားမှန်သဖြင့် ဘုထွက်လာလေသည်။
" ဘာလို့ လုပ်တာလဲ?????? ကိုယ့်ညီမကို... နင်ကလေ တော်တော်ဆိုးပါလား...... "
" သူ့ ကိုမပြောနဲ့ လို့ ပြောသားပဲ... ပြောရင်လုပ်မယ်လို့ ပြောသေးတာပဲ... သူကဆက်ပြောတာကို...... "
သို့ သော်လည်း ယခုအချိန်ထိတော့ ထိုအကျင့်က မပျောက်သေး။ မလုပ်ခင်ကြိုကြိုပြောတတ်ချင်းနှင့် စကားကုန်သွားလျှင် လက်ပါလာခြင်းက ကောင်းခြင်းလား မကောင်းခြင်းလားတော့မသိ။ သူမကတော့ မပြောဘဲ တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ခြင်းထက် ပြောပြီးမှ တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ခြင်းကို ယခုတိုင် စွဲနေဆဲ.........။
Posted by sweetpeony at 9:25 PM
Labels: ကိုယ့်အကြောင်း တစေ့တစောင်း
MANORHARY Thursday, March 12, 2009 at 2:12:00 PM GMT+8
ခုထိ စဉ်းစားတုန်း ...း)
တက္ကသီလာ ကျောင်းတော်မှာ (၁)